Zimsebenzele izinkundla zokuxhumana ozoshubisa kwiSibaya
USIZWE izinkundla zokuxhumana uWendy Gumede ozoshubisa izinto emdlalweni okhonjiswa kwiMzansi Magic, Isibaya
NQOBILE MASIMULA | January 20, 2020
UZOSHUBISA izinto umlingisi omusha kwiSibaya oqale ukubonakala ngesonto eledlule kulo mdlalo okhonjiswa phakathi nezinsuku kwiMzansi Magic ngo-8.30 ebusuku.
UWendy Gumede (26) odlala indawo kaNolwandle ongudadewabo kaBhekumuzi, wazalelwa eThekwini kodwa kwadingeka ukuthi bathuthele eNgwelezane, eMpangeni, kulandela ukushona kwabazali bakhe eneminyaka engu-13.
“Ngaqala ukuba nothando lokulingisa ngesikhathi ngibhala ngiphinde ngiqondise imidlalo yeshashalazi yasesontweni. Lolu thando lwakhula nami ngaze ngaya enyuvesi ukuyokwenza izifundo eziqondene nakho,” kusho uWendy.
Le ntokazi eyathola iziqu zayo e-University of Cape Town, inekhasi kwiYou Tube elibizwa ngeThe Black Wendy Channel kanti yilapho aqale khona ukuzakhela abalandeli ngama-video awafakayo.
“Ngesikhathi ngiseKapa ngangisaqhubeka nokubhala nokuqondisa imidlalo yasesontweni kanti bese ngibuye ngisize esikoleni uma kunemncintiswano yezokulingisa,” kuchaza uWendy.
Uveze ukuthi ukudlala kwakhe kwiSibaya kuyiphupho akade aba nalo neselifezekile manje.
“Kuyisibusiso esikhulu. Lo mdlalo uhluke kakhulu kangangoba uma ngiwubuka ngizibona mina, umndeni wami nosiko lwami. Abantu bangalindela lukhulu kuNolwandle, abanye bazomthanda abanye bazomzonda,” usho kanje.
Echaza ngoNolwandle, uthe ungowesifazane ohlekisayo futhi ongacwecwi amagama uma ekhuluma.
Ukholelwa ukuthi iThe Black Wendy Channel imsizile kakhulu ekutheni athole leli thuba.
“Ingisize kakhulu njengoba ngikwazile ukuthola imisebenzi emibili ngenxa yayo. Kungekudala ngithole ithuba lokwenza isikhangiso sesiZulu ngaphinde ngathola ithuba lami lokuqala lokulingisa kwiSibaya,” kuchaza uWendy.
UWendy uqale ngokuba sethimbeni lababhali njengoba manje esekwenza kokubili, ukubhala nokulingisa.
UWendy ubuye wagcizelela ukubaluleka ngokuzithemba ngethalente osuke unalo ukuze ungalindeli ukufunzwa kodwa uzenzele wena.
“Ukube ngahlala ngalinda ukuqashwa kuqala ngabe asikhulumi namhlanje.
“Ngazenzela mina kuqala umsebenzi ngishutha ngeselula ama-video agcina ngokubonwa abantu abasezindaweni eziphakeme,” kuphetha uWendy.